हरेक महिना २० जनाको ‘ब्रेनडेथ’::Online News Portal from State No. 4
अंग प्रत्यारोपण भने वर्षमा एकजनाको मात्रै
बागलुङ, २० जेठ – २७ वैशाख ०७४ मा निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा सिन्धुली खाङसाङ-८ का ३० वर्षीय गोविन्द भुजेल सवारी दुर्घटनामा परे । गम्भीर घाइते भुजेललाई उपचारका लागि काठमाडौंको कान्तिपुर अस्पताल ल्याइयो । २८ वैशाखमा साँझपख चिकित्सकले भुजेलको ‘ब्रेनडेथ’ अर्थात् मस्तिष्क मृत्यु भएको घोषणा गरे ।
यो एक उदाहरण हो, ब्रेनडेथ भएका व्यक्तिका विभिन्न महत्वपूर्ण अंग अन्य व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ । तर, दुर्भाग्य के छ भने ब्रेनडेथ भएका व्यक्तिको अंग प्रत्यारोपणमा जिम्मेवार स्वास्थ्य संस्थाहरू नै बाधक बनेका छन् ।भुजेलको अंग प्रत्यारोपणपछि अहिलेसम्म केन्द्रले एउटै पनि ‘केस’ पाएको छैन । त्यसो त केन्द्र स्थापनापछि अहिलेसम्म यही एउटा मात्रै केस आएको हो । काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी तथा निजी अस्पतालले उपचारका क्रममा आफूकहाँ ‘ब्रेनडेथ’ भएका घटनाको जानकारी प्रत्यारोपण केन्द्रलाई नै गराएका छैनन् ।
‘ब्रेनडेथ’ भएकाहरूको व्यक्तिबाट मिर्गौला, फोक्सो, मुटु, कलेजो, प्यान्क्रियाज, सानो आन्द्रा, आँखाका नानी तथा छालालगायत अंग प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ । पहिलोपटक ‘ब्रेनडेथ’ भएकाको मिर्गौला मात्रै प्रत्यारोपण भएको डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । नयाँ पत्रिका